रवि लामिछानेको ग्यालेक्सी टिभीबारे थाहा पाउनुअघि यसरी बुझ्नुहोस् फोरके प्रविधि - Tech News Nepal Tech News Nepal
तपाईंको मोबाइल दर्ता छ ? छैन भने अनलाइनबाटै
मंगलवार, फाल्गुन ११, २०७७ १८:३३
विश्वकै सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट नेपालमा
१८ जीबी र्‍याम भएको विश्वकै पहिलो स्मार्टफोन सार्वजनिक
गुगल म्यापमा साथीको लोकेसन थाहा पाउन यसरी पठाउनुहोस्
डिजिटल सिग्नेचरका लागि चौधरी ग्रुपको कम्पनी मोल्डसेलको आफ्नै
रवि लामिछानेको ग्यालेक्सी टिभीबारे थाहा पाउनुअघि यसरी बुझ्नुहोस् फोरके प्रविधि
काठमाडौं । सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले मंगलबार ‘ग्यालेक्सी फोरके’ नामको नयाँ टेलिभिजन सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांश च्यानल एचडी प्रविधिमा समेत अद्यावधिक हुन नसकिरहेको अवस्थामा लामिछानेले च्यानलको नाममै फोरके राखेका छन् ।
साथै उनले आफ्नो नयाँ च्यानल देशकै पहिलो फोरके च्यानल भएको पनि दाबी गरेका छन् । लामिछानेले दाबी गरेको जस्तै देशको पहिलो फोरके टेलिभजन च्यानल हेर्दाको अनुभव संगाल्न धेरै दर्शक आतुर हुन सक्छन् ।
तर फोरकेको आनन्द उठाउनुअघि आज हामी तपाईंलाई फोरके प्रविधिबारे बताउने छौं । वास्तवमा फोरके कुनै नयाँ प्रविधि होइन । यो एउटा रेजाेलुसन स्ट्याण्डर्ड (resolution standard) हो । यस्तो किसिमको प्रविधिमा भिडियो, डिस्प्ले तथा प्रोजेक्टर बजारमा आएको धेरै भइसक्यो ।
युट्युबले नै २०१० देखि फोरके भिडियो अपलोडको अनुमति दिन सुरु गरेको हो । त्यसअघि सोनीले करिब २०१२ तिर पहिलो फोर के प्रोजेक्टर ल्याएको थियो । आजभन्दा करिब १८ वर्षअघि पहिलो फोर के क्यामेरा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
अहिले त यो सामान्य र सर्वसुलभ प्रविधि बनिसकेको छ । यो सामान्य व्यक्तिका लागि सजिलै उपलब्ध छ । सबै किसिमका उपकरणमा यसको प्रयोग हुन थालिसकेको छ । यो एउटा रेजाेलुसन प्रविधि हो, जसलाई रेकर्डिङ र स्ट्रिमिङ दुवैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
रेजाेलुसनको कुरा गर्दा केही कुरा थाहा पाउँदा सरल रूपले बुझिन्छ । डिस्प्लेमा साना साना युनिट हुन्छन्, जसलाई पिक्सेल भनिन्छ । फोरकेमा ३ हजार ८४० फिक्सल होरिजेन्टल्ली हुन्छन्, भने भर्टिकल्ली २ हजार १६० पिक्सल हुन्छ । होरिजोन्टल्ली यसमा करिब ४ हजार पिक्सल हुने भएकोले यसलाई फोरके भनिन्छ ।
फुल एचडी र फोरकेमा फरक
फुल एचडीमा रेजाेलुसन १९२० र १०८० हुन्छ । जब यसको उचाई र चौडाई दुवैमा पिक्सेललाई दुई गुणा बढाइन्छ तब यसमा फोरके पाइन्छ । एउटा फुल एचडीको चार गुणा पिक्सेलमा फोरके रेजुलेसन पाउन सकिन्छ । टु केको कुरा गर्दा त्यसमा १२८० र ७८० पिक्सल हुन्छ ।
फोरके को स्क्रिन रेजाेलुसनकाे कुरा गर्दा यसमा कुल ८ मेगापिक्सेल हुन्छ । किनभने यसको चौडाई करिब ४ हजार र उचाई करिब दुई हजार पिक्सलको छ । जब तपाईं यी दुवैलाई गुणा गर्नुहुन्छ, तब तपाईंले यसमा करिब ८० लाख पिक्सेल पाउनुहुन्छ ।
अब फूल एचडीको कुरा गर्दा त्यसमा करिब २० लाख पिक्सेल हुन्छ । यसको गुणस्तरीयता फुल एचडीभन्दा चार गुणा राम्रो हुन्छ ।
फोर के कन्टेन्ट
तपाईंसँग फोरके टेलिभिजन छ, तर तपाईसँग फोरके कन्टेन्ट छैन भने त्यसलाई हेर्न मज्जा आउँदैन । यसका लागि तपाईंले आफ्नो मोबाइलबाट फोरके भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युब वा इन्टरनेटबाट फोरके भिडियो सामग्री डाउनलोड गरेर टिभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ । फोरके भिडियो रेकर्ड गर्न तपाईंसँग कम्तिमा १२ मेगापिक्सलको क्यामेरा हुनुपर्छ ।
रबि लामिछानेले सुरु गरेको यस नयाँ फोरके च्यानल मार्फत क्राइम पेट्रोल नेपाल, को बन्छ करोडपति, रामायण, सारेगम, लाल मोहर, सिधा कुरा, आविष्कार लगायतका कार्यक्रम प्रशारण हुनेछन् ।
यसरी सजिलै बुझ्नुहोस् अपरेटिङ सिस्टम र यसको काम
काठमाडौं । कम्प्युटर तथा मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले सुन्दै आइरहेको शब्द हो अपरेटिङ सिस्टम । सामान्यतय हाम्रो
के हो स्क्रिनको एस्पेक्ट रेसियो ? सजिलै यसरी बुझ्नुहोस्
काठमाडौं । जब तपाईं टिभी, स्मार्टफोन जस्ता कुनै पनि स्क्रिन भएका डिभाइस खरिद गर्नुहुन्छ, स्क्रिनको
के हो डेटा रोमिङ र यसबाट कसरी सेवा लिने ?
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताहरुले धेरै सुन्दै आइरहने शब्द हो डेटा रोमिङ । यो अप्सन
सरल रूपमा यसरी बुझ्नुहोस् इन्टेल कोर आई ३, आई ५ र आई ७
काठमाडौं । इन्टेल धेरैलाई मन पर्छ । कम्पनीले बनाउने प्रडक्ट एकदमै कूल हुन्छन् । तर
तपाईंको मोबाइल दर्ता छ ? छैन भने अनलाइनबाटै यसरी गर्नुहोस्, नत्र जेठदेखि बन्द होला
अगाडि पछाडि दुवैतिर स्क्रिन भएको फोन ल्याउँदै ह्वावे
अरुको ईसेवा अकाउन्टमा पहुँच पुर्‍याई ठगी गर्ने खड्का पक्राउ
इन्टरनेट ब्याण्डविथ आयातमा सीमा, अब १०० जीबीपीएसभन्दा कम ल्याउन नपाइने
तीव्र गतिमा आफ्नो नेटवर्क विस्तार गर्दै क्लासिक टेक